कास्की माओवादीमा कस्लाई टिकट ? | eAdarsha.com
कास्की माओवादीमा कस्लाई टिकट ?
पोखरा, ११ कात्तिक। आगामी चुनावमा दलहरुले गठबन्धन गरी चुनाव लड्ने पक्का भइसकेको छ। मुख्यतया वाम र लोकतान्त्रिक गरी दुर्इ बलिया गठबन्धनकै पोल्टामा परिणाम पर्ने देखिन्छ। गठबन्धन हुँदैमा जो कोही उम्मेदवारले चुनाव जितिहाल्छन् भन्ने छैन।
चुनावको सर्न्दर्भमा पछिल्लो समय मतदाता सोचेभन्दा धेरै सचेत भइसकेका छन्। मतदाताले पार्टीन्दा पात्र हेर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। गठबन्धनसँगै कुन दलबाट को उम्मेदवार हुँदा धेरै मत आउँछ भन्ने अनुमान र चर्चा भइरहेका छन्।
कास्कीको सर्न्दर्भमा वाम गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभाअन्तर्गत कास्की क्षेत्र नं १ ‘क’ पाउने भएको छ। ‘क’ मा माओवादीबाट शुरुदेखि नै नेता झलकपाणि तिवारी र नवराज बराल चर्चामा छन्।
एमालेले ‘ख’ नछाड्ने भएपछि ‘ख’ का आकांक्षी दीपक कोइराला पनि ‘क’ मै आउने दाउमा रहेको श्रोत बताउँछ। प्रवल दावेदार मानिएका तिवारी समानुपातिकमा परेकोले बरालको सम्भावना बढ्दो छ ।
तिवारी समानुपातिकमा बस्न तयार नहुने र कोइराला पनि ‘क’ मा आउने मनस्थितिमा पुगेपछि पार्टीभत्र छनौट प्रक्रिया जटिलतातर्फ पुगेको स्रोत बताउँछ। माओवादीका तीन दावेदारमध्ये तिवारी साविक लेखनाथको बरालडाँडाका हुन् भने कोइराला चितवनका हुन्। बराल लेखनाथ सातमुहाने देउरालीका स्थायी बासिन्दा हुन्। पार्टीको टिकट यी तीनमध्ये कस्ले पोल्टामा पार्ने हो, यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन।
तिवारी र कोइरालासँंग पार्टीको कास्की इन्चार्ज रहेर काम गरिसकेको अनुभव छ। बराल अहिले चर्चामा रहेका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा कान्छा हुन्। २८ वर्षीय बरालले पार्टीभत्र सिनियरको सिन्डिकेट तोड्ने र युवा नेतृत्वको विकास हुनुपर्नेमा जोडदार बहस चलाउँदैआएका छन्।
यसैगरी, माओवादीले प्रदेशमा बढीमा तीन सिट पाउने बुझिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नं २ को ‘ख’ माओवादीको भागमा पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्र हो। ‘ख’ परेमा माओवादीबाट ज्ञानबहादुर कोइराला र रामप्रसाद पौडेल धेरै मत ल्याउने सम्भावित पात्र हुन्। कोइराला पोखरेलीमा माओवादी नेतामध्ये सबैभन्दा स्थापित नेता मानिन्छन्। जनयुद्धमा लामो समय जेल बसेका, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आवद्ध भएका र सामाजिक सम्बन्धको कारणले पनि उनको सम्भावना बलियो छ ।स्रोतका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा माओवादीको भागमा ‘ख’ पर्ने बताइन्छ। जुन क्षेत्रमा रामजी बराल उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुखकी उम्मेदवार गोमा ढकाल समेत आकांक्षी हुन्। बराल गत संविधानसभा निर्वाचनमा कास्की ३ बाट पराजित भएका थिए। पुम्दीभुम्दीका बराल र लेकसाइडकी ढकाल दुवै माओवादी राजनीतिमा स्थापित नाम हुन्।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचित सदस्य, महिला तथा उद्यमी समेत भएकोले ढकालले टिकट पाउने सम्भावना देखिन्छ । उनको पार्टीा पहुँच र योगदानका आधारमा आगामी मंसिर २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन उम्मेदवार बन्ने सक्ने माओवादी स्रोत बताउँछ।
- नारायण शाही